Abokugqibela abangama-28 boMangaliso weNdalo- iGeofumadas
NgoJulayi, 2009 Internet kunye neBlogs
Abakhuphiswano abangama-28 besigaba sokugqibela sokhuphiswano lwezimangaliso zendalo ezisixhenxe sele zibhengeziwe, ngexesha lezithuba ezininzi esilandele ngazo ngesi sihloko. Ukujonga kwakhona ndiye ndafumanisa ukuba esi sihloko asindonwabisanga hayi kancinci, kulungile ngendenze udidi kuba le sele iyiposti yam ye-7 ngesihloko:
Kule posi ngoJanuwari 2008 7 ndaziphosa ikuko kumazwe iSpanish abathetha, la iphila Angel Falls kuphela. (1 of 7)
Ukuvota njani kwiimpawu ze-7 zemvelo, uJanuwari 2008
Kwinyanga kamva ndenze isiphakamiso ngokwemibare yokukhula, iphile: El Salto del Angel, Grand Canyon, Galápagos naseIguazú. (4 ukusuka kwi-7)
Ngaloo mini wayethetha ngokusasazeka kwemimangaliso ukuba elinye ithuba linikezwe ngelizwekazi ngalinye
UMzantsi Melika: 1
I-Central Central: 1
Intshona Melika: 1
Kulo thuba ndathetha ngamathuba phambi koluntu ngelizwekazi kunye nokufikelela kwi-Intanethi.
Asia wayeza 4, 3 Europe, North America (kungabandakanywa Mexico) kunye Latin America 2 wayeza 1.
Iimpawu ze-7, phantse yonke into ibuyele eqhelekileyo
Apha ndacebisa abangama-21 abanokugqibela, kunye nabagqatswa abathathu kwilizwekazi ngalinye. Kwezo ndibethe izi-3.
I-77 Environmental Wonders sele iqeshwe
I-7 Wonders, imfazwe ye-77
Kule post, i-11 / 11 / 11 abaphumeleleyo bapapashwa
Ukuzihlaziya kwakhona, indlela inkqubo yokukhetha isebenza ngayo, ngoku ngoku sisesigaba sokugqibela.
Le nkqubo yaqala ukusuka kwi-2007, kunye neengxenye ze-440 zamazwe akwa-220. Emva koko abaviwa be-77 abanamavoti amaninzi kunye nabo bafumene amaxwebhu afanelekileyo avela kumazwe abo akhethwe. Kule nqanaba sinjalo, iintsuku ezimbalwa ezedlulileyo isaziso senziwe ukuba i-28 yokugqibela ikhethwe, apho i-7 iza kukhutshwa khona.
Umviwa Izwe Zwekazi
Brazil / Argentina EMelika (7)
8. Ihlathi elimnyama
10. ILwandle laseMasurian
12. Iziqhumane zamadaka
ESwitzerland / eItali
Italia Yurophu (6)
14. I-Archipelago Bu Tinah Shoals
15. Ulwandle olufileyo
18. Isiqithi saseJeju
20 IPuerto Princesa ephantsi komhlaba
I-Indiya / I-Bangladesh
23. I-Great Barrier Reef
25. I-Milford Sound
I-Papua New Guinea kunye ne-Australia
28. Intaba yeTable Thanzaniya
EMzantsi Afrika Afrika (2)
Usizi, kodwa akukho zithintelo ezaneleyo, ngokukhawuleza
Siza kulinda i-2 izithuba eMelika. Okwangoku ke ukuphumelela okukhulu okuye kwabakho abaviwa abangazange bakholwe beza apha, kusenza sizisole ngabanye abasalayo; Oku kukutsho kwam:
Kilimanjaro (ukuba ufumana amavoti anele)
Ipaneli entsha yokuvota sele iphuculwe, kufuneka ukhethe abaviwa ngokuchofoza inkinobho eluhlaza.
Post edlulileyo«Ngaphambilini I-GUM ye-Quantum, okokuqala ngqondweni
Post Next Zingaphi iprojekthi ezifanelekile kule blogi?Okulandelayo »